RW Soomaaliya oo Gudoonka Baarlamaanka u faah-faahiyay qorshaha cusub dhismaha ciidanka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta RW Soomaaliya oo Gudoonka Baarlamaanka u faah-faahiyay qorshaha cusub dhismaha ciidanka
RW Soomaaliya oo Gudoonka Baarlamaanka u faah-faahiyay qorshaha cusub dhismaha ciidanka
Kulankan ayaa waxaa uu ku saabsanaa qorshaha dhismaha ciidamada ee ay mooshinka ka keeneen Guddiga difaaca Baarlamaanka, kaddib markii ay saluugeen qaabka loo dejiyay qorshaha amniga dalka.
Xildhibaanada ayaa su’aalo ka weydiiyay Ra’iisul Wasaaraha arrimaha dhismaha ciidamada iyo tirada maamul goboleedyada ay yeelanayaan, taasoo ay sheegeen inay keeni karto xiisad la mid ah tii Galmudug iyo Puntland, hadii Ciidamo gaar ah sameystaan maamul goboleedyada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in qorshaha ammaanka dalka aanu saameyn doonin ciidamada qalabka sida, isagoo xusay in ciidamada la tayeynayo, lana qalabeynayo.
Sidoo kale waxaa uu Guddiyada Difaaca iyo Arrimaha Gudaha u faah faahiyay sida loo dhisayo ciidamada, hannaanka loo wajahayo sugida amniga iyo arrimo kale oo isla ammaanka ku saabsan, waana ay ku qanceen.
Labada Guddi ayaa loo xil saaray inay soo qaabeeyaan nuxurka doodii xalay iyo talooyinkii la soo jeediyay, iyadoo qoraal loo gudbinayo Xukuumadda, isla markaana ugu dambeyn ay Xukuumadda qoraalka oo tifaftiran horkeeni doonto Baarlamaanka, ka hor inta aanu xirmin kalfadhiga Baarlamaanka.
Shirkii madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa laga soo saaray qorshaha amniga dalka ee ku saabsan dhismaha ciidamada, iyadoo la isku raacay in la dhiso ciidamo gaaraya 18-kun oo askari oo min 3-kun uga imaanaya maamul goboleedyada, waxaana qorshahan la geyn doonaa shirka London.
Previous articleSoomaaliya iyo Turkiga oo heshiisyo kala saxiixday: Sawiro
Next articleFaallo: Waa soo jireen xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga